Mogadishu Journal » Diyaargarowga kulanka Kim iyo Turmp oo si wanaagsan u socda
Diyaargarowga kulanka Kim iyo Turmp oo si wanaagsan u socda
Mjournal :-Mareykanka ayaa sheegay in uu si wanaagsan u socdo diyaar garowga kulanka lagu wado in 12 bishan uu dalka Singapore ku dhexmaro madaxwayne Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
Aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka ayaa sheegay in labada masuul ay marka hore kulmi doonaan saacadu marka ay tahay 9 xiliga Singapore islamarkana Mr Trump imika maalin waliba loo soo gudbiyo macluumaadka diyaargarowga.
Balse aqalka cad ayaa intaa ku daray in aan la qaadi doonin cunaqabataynta saaran Kuuriyada Waqooyi ilaa ay ka talabaxayso hubkeeda niyukleerka.
Iyada oo ay hal toddobaad uun ka harsan tahay waqtiga uu dhacayo kulankaasi ayaa dalka marti galinaya ee Singapore waxa ay bixiyeen faahfaahin kooban oo arrintan ku saabsan.
Ma acadda ilaa iyo imika magaalada ay ku kulmi doonaan labada masuul.
Wadaxaajoodka ayaa waxaa gundhig u noqon doona arrinta sidii gacanka Kuuriya uu u noqon lahaa mid ka madaxbanaan niyukleerka.
Kooxda Xasaradaha Adduunka oo ka digay in Khilaafka Khaliijka uu saameyn ku yeesho Soomaaliya